Nkuzi gam akporo site na ntinye: nweta ihe kacha na ekwentị gị | Gam akporosis
Mgbe anyị na-ekwu banyere nkuzi, anyị na-ezo aka na usoro ọmụmụ ndị ahụ dị mkpirikpi ma ọ bụ ntuziaka nke a na-akụzi ihe niile dị mkpa iji ngwaahịa niile ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ndị ahụ eme ihe igwegharị ugbu a na-etinye, dị ka nke gam akporo. Na ụwa nke Mgbakọ, o doro anya na nkuzi na-iji ikwado niile ihe aga-eme ka ọrụ, na Ntụziaka chọrọ maka ọrụ ka mma, na-agbaso usoro ezi uche mgbe niile. Ihe nkuzi na ụkpụrụ na-egosi ọkwa dị ala, mana nke ahụ na-agbagwoju anya, yabụ ọ dị mkpa ịgụ ha kpamkpam ma nwee nnukwu mmụta nke mmụta.
N'okpuru ị ga-ahụ nkuzi nkuzi ọfụma kachasị mma iji nweta ọtụtụ gam akporo ma ọ bụ mụta otu esi edozi ya n'ụzọ ziri ezi. Don't maghị ka esi eji ihe eji ekwentị ma ọ bụ mbadamba ihe eme ihe? N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị otu esi eji ngwaọrụ gị eme ihe ọ bụla.
por Ignacio Sala eme 3 izu .
N'agbanyeghị eziokwu na ọtụtụ akụrụngwa kọmputa, ma desktọọpụ ma obere, anaghịzi agụ onye na-agụ ya ...
Versiondị ọhụrụ ọ bụla nke gam akporo gụnyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụmatụ ọhụrụ, nke yana ndozi nchedo. Maka…
Ọ bụ karịa ka ọ dị na mbụ ịhụ ka ama anyị si ekpo ọkụ nke ukwuu n’oge ọkọchị, karịa ka ọ dị na mbụ. Otú ọ dị…
Agbanyeghị na ugbu a enwere ọtụtụ ndị na-akwụsị inye nkwado ekwentị, anyị ka nwere ike ịchọta ...